[OFISIALY] dr.fone - Android Screen mpitam-boky: Mirror sy Record Android Device
dr.fone Toolkit - Android Screen mpitam-boky
Iray Click To fitaratra ary hanoratra ny fitaovana Android.
Fitaratra ny fitaovana Android amin'ny solosaina efijery wirelessly.
Record lalao, horonan-tsary, sy ny maro hafa.
Navalin'i fampiharana ara-tsosialy sy ny hafatra hafatra an-tsoratra amin'ny PC.
Raiso Dikasarin'ny ny Android efijery mora foana.
Andramo izany Free Buy izao
Raketo an-tsoratra ny fitaovana Android mampiasa PC
See rehetra Features
Support mba hanoratra ny rafitra-peo ny fitaovana.
Mijery fitaratra ny fitaovanao in HD toetra.
1 Tsindrio ny Hanomboka
Manomboha nanoratra haingana sy mora foana.
Tohano peo toe-javatra hafa.
Enoy ny lalao malaza indrindra teo amin'ny efijery lehibe kokoa
Amin'ny Android Screen mpitam-boky, dia afaka mankafy ny lehibe rehetra sy mampientanentana ny lalao (toy ny Fifandonana Royale, fifandonana ny fokony, Pokemon ...) eo amin'ny PC sy hampandeha tsara mora foana.
Fitaratra ny Android lamba avy hatrany
Na inona na mila manana famelabelarana ny raharaham-barotra na eduation, ny lamba fanakonana mirroring fiasan'ny Android Screen mpitam-boky dia manampy anao hampiaiky volana ny mpihaino rehetra.
Raketo an-tsoratra ny Android lamba amin'ny 0 kalitao intsony.
Amin'ny tsindry iray, dia afaka tsoratra velona rehetra votoaty eo amin'ny fitaovana Android, tsy misy kalitao very.
Export HD horonan-tsary ao amin'ny solosaina
dr.fone Toolkit - Android Screen mpitam-boky dia afaka fanondranana HD horonan-tsary ho anao solosaina. Izany dia voavonjy ho rakitra MP4 ary afaka mizara izany amin'ny namanao, na handefa ny Youtube.
Miaraha miasa indrindra amin'ny rehetra Androie fitaovana
Tsy maninona ianao mampiasa Samsung, Huawei, LG, HTC, Android Sony na hafa smartphone, Android Screen mpitam-boky dia mifanaraka tanteraka aminy.
Wireless Mirroring for Any toe-javatra
jereo ny Guide
Miasa toy ny fandefasana ny mizara ny telefaonina lamba tao amin'ny efitra iray feno olona.
Hanoratra sy hizara ny fanendrena amin'ny efitrano fianarana iray manontolo.
Ankafizo ary hanoratra Android lalao amin'ny efijery lehibe kokoa.
Ampiasao ny Android Smartphone ao amin'ny famelabelarana any am-piasana.
Showcase vokatra sy mamorona fihetsiketsehana ara-potoana miaraka amin'ny haingana toy.
Firaketana an-tsoratra velona rehetra votoaty eo amin'ny finday Android amin'ny HD toetra.
Ny tsara indrindra lamba mirroring Android sy ny firaketana zava-nitranga!
dr.fone ny antoka
Safe, fifadian-kanina, ary ny kely saina.
Hanomboka amin'ny iray nanoratra tsindry.
Tsy misy atahorana ny telefaonina na ny tahirin-kevitra.
Simple, intuitive, dingana.
Tohano Android rehetra Fitaovana
Android mpitam-boky Screen misy Android rehetra manohana ny hevitra ao an-tsena. Na inona na manana Samsung, HTC, Sony, Motorola, Google Rohy, LG, na ZTE, sns ary inona no dikan ny finday Android dia mihazakazaka, Android mpitam-boky Screen manampy anao fitaratra ary an-tsoratra ny Android sy hampandeha tsara lamba mora foana.
Inona no azontsika atao amin'ny Android Screen mpitam-boky?
Android Screen mpitam-boky dia tsotra sy mety mirroring lamba sy ny fitaovana fandraisam-peo ho an'ny Android fitaovana. Azonao atao an-tsoratra Android lamba amin'ny Zero Quality Loss. Ihany koa manohana ny haka screenshof ny Android efijery, hamindra antontan-taratasy eo amin'ny ordinatera sy ny fitaovana Android
Ahoana no ananarako ho an'ny Android Screen mpitam-boky?
Tsy manome karazany roa ny fahazoan-dalana ho an'ny Android Screen mpitam-boky, izay iray taona License sy miavaka License.
Inona no tokony hitandrina rehefa tsoratra Android Screen?
Aza vonoy ny finday lamba na hanova izay toe-javatra an-telefaonina nandritra ny fandraisam-peo dingana.
Aiza no voarakitra lahatsary voavonjy?
Ny voarakitra vidoe dia voavonjy ny C: \_ mpampiasa \_ Admin \_ Desktop amin'ny toerana misy anao. Azonao atao ihany koa tsindrio eo amin'ny Settings Record Settings amin'ny Android Screen mpitam-boky hanova ny afa-toerana.
izany dia mora
Android Screen mpitam-boky lehibe. Tsy fantatro aho nanoratra ny Android lamba toy izany dia mety ho mora.
tiako Android efijery mpitam-boky
Android efijery mpitam-boky dia mora ny mahatakatra. ny voarakitra lahatsary dia tena HD. maro noho ny ekipa.
Tiako ny fitaratra asa. mahatonga ny famelabelarana mandeha tsara.
Top 10 Best Game Screen Recorders ho an'ny Android
Top 5 Android Screen mpitam-boky ho an'ny Android Phone
Ny fomba fampiasana Android Screen mpitam-boky amin'ny teny
Ahoana no mba hanoratra Android Screen On PC
5 Android Best Free Voice mpitam-boky ho an'ny Android Phone
Top 5 tsara indrindra Video mpitam-boky ho an'ny Android Phone
Ny mpanjifa ihany koa ny Fitrohana:
Android Data fitrandrahana (simba Device)
Fanavotana angona avy tapaka Android finday sy ny takela-bato tamin'ny 5 minitra.
Esory ny mihidy lamba avy amin'ny fitaovana Android tsy very angon-drakitra.
Fantenana Android nomaniny ho solon'izay ny tahirin-kevitra eo amin'ny solosaina ary hamerina izany araka ny ilaina.